महिलालाई कस्तो अवस्थामा यौन प्रस्ताव राख्ने ? | Online Nepal
काठमाडौं – नेपाली समाजका यौनका विषयमा खुलेर कुरा गर्न सकिँदैन। मनमा यौनका विषयमा विभिन्न जिज्ञासाहरु भए पनि अरुले के भन्छन् भन्ने डरले मानिसहरु आफ्नो जिज्ञासाहरुलाई मनमै दबाउँछन्।
तर विज्ञहरु यस्त विषयमा पनि खुलेर बहस गर्नुपर्ने बताउँछन्। यौन मानव जीवनको अभिन्न पाटो भएकाले यस विषयमा परामर्श गर्नुपर्ने स्वास्थ्यविदहरु पनि बताउँछन्।
स्वस्थ जीवनका लागि यौन आवश्यक रहेको विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष छ। यौनका लागि समय, वातावरण, परिस्थितिसँगै पार्टनरको मुड पनि आवश्यक छ। त्यसैले यहाँ हामी महिलाहरुलाई कस्तो अवस्थामा यौन प्रस्ताव राख्ने भनेर चर्चा गर्दैछौं।
महिलाहरूलाई महिनावारी पूरा भएको पाँचदेखी सात दिन भित्र यौन इच्छा बढी हुने एक अध्ययनले देखाएको छ। यो अवधिमा महिलामा यौन आनन्द पनि बढी आउने सो अध्ययनले देखाएको छ। जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ बेम्वर्गनका अनुसन्धाताहरूले सो कुरा पत्ता लगाएका हुन्। उनीहरुले एक हजार युवती अनुसन्धान गरेका थिए।
अनुसन्धानकर्ताले सहभागीहरूलाई कुन समय यौनसम्बन्ध राख्न इच्छा बढी हुने र कुन समयमा बढी आनन्दको अनुभूति हुन्छ भन्ने प्रश्न सोधेका थिए।
अनुसन्धाताहरूले त्यस अवधिमा युवतीहरूको मस्तिष्कमा परिवर्तन पनि अध्ययन गरेका थिए। सो अध्ययनले त्यसअवधिमा गरिने यौन सम्पर्कले वैवाहिक जीवनलाई रोमाञ्चीत बनाउने देखाएको छ। त्यसकारण यस अवधिमा महिला वा युवतीलाई यौनका लागि प्रस्ताव गरेमा उनीहरुले सहजै स्विकार गर्ने अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ।
कुन समयमा महिलाहरुमा यौन चाहना बढी हुन्छ ?
प्रहरी भ्यानभित्र युनिफर्म नै लगाएर दुई प्रहरी यौन सम्बन्ध राख्दै थिए, बटुवाले भिडियो भाइरल गरिदिएपछि…
मोटरसाइकल र ट्याक्सीमा लिफ्ट, बदलामा यौन सम्बन्धको शर्त !
चीन र रुसमा फेरि बढे कोरोना संक्रमित , डरलाग्दो अवस्था आउन सक्ने चेतावनी
६,९३१ नमूना परीक्षण गर्दा ५१३ जनामा कोरोना पुष्टि, ८ जनाको मृत्यु
योगेश भट्टराई वीर अस्पताल भर्ना, भेटघाट बन्द
७०८ जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा ११ जनाको मृत्यु, ९३२ जना डिस्चार्ज